Tobanaan kun oo ku barakacday Daarfuur - BBC Somali
Tobanaan kun oo ku barakacday Daarfuur
18 Febraayo 2016
Image caption Barakacayaasha Daarfuur
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in in ka badan todobaatan kun oo qof oo rayid ah ay ku barakaceen dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Daarfuur ee waddanka Suudaan.
Dagaal u dhaxeeya ciidammada dowladda iyo fallaagada la magac baxday Ciidammada Xoreynta Suudaan, ayaa sii xoogaystay bartamaha bishii Janaayo ee sanadkan.
Qayba badan oo ka mid ah dadka halkaasi ka qaxaya ayaa waxa ay maciin bideen xarun ay maamulaan ciidammada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay iyo kuwa Midoowga Afrika ee ku sugan waqooyiga Daarfuur.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in ay ka shaqeynayso in ay ogaato waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka halkaasi soo gaaraya walow ay aad u adagtahay in ay gargaar la gaarto kumanaanka kun ee qof ee ku barakacay bartamaha Daarfuur maadaama aanay mas’uuliyiinta Suudaan u ogalaan in ay halkaasi galaangal u yeeshaan.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada Adduunka ee loo soo gaabiyo WFP, ayaa waxa ay ku raja weyn tahay in ay dadka soo barakacay ay ku caawiso lacag iyadoo adeegsameeysa mashruuca gargaarka lacageed si ay lacagtaasi cunno ugu iibsadaan.
Dhanka kale hay’adaasi ayaa waxa ay heeshis ku kacaya ku dhawaad 90 milyan oo doolar la saxiixatay maamulka gobolka Daarfuur.
Arrintan ayaa waxaa looga gogoleyahay in dib loogu dhiso gobolkan ay colaaddu halakaysay.
In ka badan toban sano ayaa gobolka Daarfuur waxaa ka jirtay colaad iyadoo mudadaasi ay gobolkaasi ku barakaceen in ka badan hal milyan oo qof.